धमलाको हमलामा किन रोइन् पूजा शर्मा ? « Ramailo छ
धमलाको हमलामा किन रोइन् पूजा शर्मा ?
सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाले चलाउने धमलाको हमला शो चर्चित छ । जनता जान्न चाहान्छन् भन्दै धमला आफ्नो शोमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई र्याखार्ख पार्ने गर्छन् । यस्तैमा ‘रामकहानी’ नायिका पूजा शर्मा पनि ‘धमलाको हमला’ मा पाहुन बन्न गइन्, जहाँ उनी रुन बाध्य भइन् । किन रोइन त धमलाको हमालामा पूजा ? भिडियो :
आमा र बुवाको सम्बन्धलाई धमलाले कोट्याउँदा पूजा भावुक हुँदै रुन पुगेकी हुन् । तपाईंको आजको यो पोजिसनमा आमाको साथ छ, बुवाको छैन हो ? भनेर धमलाले आफ्नो शोमा पूजालाई प्रश्न गरेका छन् । यस प्रश्नमा त्यस्तो नभएको जिकिर गर्दा पनि पूजालाई धमलाले प्रश्न गर्न छोडेनन् । बुवाले अर्को बिवाह गर्नु भएको हो ? भन्दा हैन भन्ने पूजाले जिजिर गरेकी छिन् ।
‘बुवालाई भेट्न चौतारा जान्छु’ भन्दा भन्दै पनि धमला फेरी सोध्छन्, ‘बुवालाई फोन गरेर आमालाई माया गर्नुस भनेर भन्न सक्नु हुन्छ ?’ धमलाको यो प्रश्नबाट पूजा भावुक हुन्छिन् र ‘यो कुरा नगरौं’ भन्दै रुन पुग्छिन् । काउली बुढी उर्फ सन्ध्या बुढा र रामकहानी टिमसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
‘सम्बन्ध भनेको आफैंले बनाउने हो । करकापमा हुने होइन्’, पूजा भन्छिन्, ‘त्यो सयममा छोरा चाहिन्छ भनेपछि मेरो आमा मेरो लागि घर छाडेर काठमाण्डू आउनु भएको हो ।’ आमा र बुवा छुट्टै बसेपनि अहिले भने सम्बन्ध राम्रो भएको पूजाको भनाई छ ।